Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Thomson's atomic model | Netwọk Mgbasa Ozi
Na sayensị enwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị ndị mere mgbanwe mgbe a bịara n’ịmara otu ihe si arụ ọrụ. Ihe omuma banyere irighiri ihe, atom, na electron emeela otutu oganihu na sayensi. Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a nye Msdị atọmịk Thomson. A makwaara ya dị ka ụdị Raisin Pudding.
N'isiokwu a ị nwere ike ịmụ ihe niile metụtara Thomson's atomic model, ihe njirimara ya bụ yana mkpa ọ dị maka sayensị.
1 Kedu ihe bụ Thomson atomic model
2 Nnwale ọla edo
3 Njirimara nke Thomson atomic Model
4 Mmachi na njehie nke ụdị Thomson atomic Model
Kedu ihe bụ Thomson atomic model
Nke a bụ ụdị nke etolitere na 1904 na enwere ike ịchọpụta mkpụrụ mbụ subatomic. Onye chọpụtara ya bụ onye sayensị Britain aha ya bụ Joseph John Thomson. Nwoke a nwere ike ịchọpụta ihe ebubo na-ezighị ezi site na nnwale nke ọ na-eji cathode ray tubes na 1897.
Ihe nchọpụta a rụpụtara buru oke ibu ebe ọ bụ na enweghị ihe akaebe na atom nwere ike inwe oghere. Nke a ọkà mmụta sayensị na-atụ aro na electrons na-emikpu na a ụdị nke ọma ebubo umi nke na-egbochi ihe na-adịghị mma ụgwọ nke electrons. Nke a bụ ihe mere atọm ndị ahụ ji akwụ ụgwọ na-anọpụ iche.
Kọwa ha n’ụzọ a ghọtara dị ka ịtụkwasị jelii na mkpụrụ vaịn na-ese n’elu mmiri. N'ihi ya aha nlereanya pudding na mịrị. Na ụdị a, Thomson bụ onye na-ahụ maka ịkpọ electrons ahụ corps, ma were ya na a haziri ha n'usoro na-enweghị usoro. Taa a maara na ha nọ n'ụdị yiri mgbaaka na-agbagharị na mgbanaka ọ bụla nwere ọkwa dị iche nke ike. Mgbe elektrọn na-efunahụ ike ya, ọ na-aga n'ọkwa dị elu karị, ya bụ, ọ na-esi n'ebe ntọala atom atom pụọ.
Nnwale ọla edo
Ihe Thompson chere bụ na akụkụ atọm dị mma na-adịgide adịgide. Ihe nlereanya a nke o kere na 1904 enweghị nnabata agụmakwụkwọ zuru ebe niile. Afọ ise ka nke ahụ gasịrị, Geiger na Marsden nwere nnwale site na mpempe akwụkwọ ọla edo nke mere ka nchọta Thomson ghara ịdị irè. Na nnwale a, ha gafere otu ogwe osisi helium alpha site na mpempe ọla edo. Ngwurugwu Alpha bụ ihe ọ bụla karịa ọdụm nke ihe mmewere, ya bụ, nuclei nke na-enweghị electrons wee nwee ụgwọ dị mma.
Ihe si na ya pụta bụ na a na-agbasa osisi a mgbe ọ gafere site na mpempe ọla edo. Site na nke a, enwere ike ikwubi na a ga-enwerịrị isi ihe nwere isi iyi nke ụgwọ dị mma nke na-ahụ maka ịgbagọ ọkụ. N'aka nke ọzọ, n'ụkpụrụ atọmịk Thomson anyị nwere na e kesara ụgwọ dị mma yana ihe ekwuru dị ka gelatin na nke nwere elektrọn. Nke a pụtara na ụdọ nke ion nwere ike ịgafe na atom nke ụdị ahụ.
Mgbe egosiri nke ozo na nnwale nke sochirinụ, ihe nlere a nwere ike ịgọnahụ atọmịk.
Nchọpụta nke elektrọn sitere na akụkụ nke usoro atọmịk ọzọ mana sitere na Dalton. Na ihe nlereanya ahụ, a na-ewere atọm ka ọ nweghị nkewa. Nke a bụ ihe kpaliri Thomson iche echiche banyere ụdị Raisin Pudding ya.
Njirimara nke Thomson atomic Model
N'ime njirimara ndị bụ isi nke ihe nlereanya a, anyị na-achikota ihe ndị a:
Atọm nke ihe nlere a yiri a okirikiri nke nwere a ghaghị ebubo ihe na electrons na ebubo na-ezighị ezi. Ma electrons na ghaghị ebubo okwu bụ ugbu a gburugburu.
Ebubo na ebubo ọjọọ nwere otu oke. Nke a pụtara na atọm niile enweghị ụgwọ, mana ọ naghị anọpụ iche.
Ya mere na atọm n'ozuzu nwere ike ịnwe ụgwọ na-anọpụ iche ndị electrons kwesịrị ka emikpu ha n'ime ihe nwere ụgwọ dị mma. Ọ bụ ihe e kwuru na mịrị dị ka akụkụ nke electrons na ndị ọzọ nke gelatin bụ akụkụ nwere ụgwọ dị mma.
Ọ bụ ezie na akọwaghị ya n'ụzọ doro anya, enwere ike ịkọwa ya na ihe nlereanya a atọm atọm adịghị.
Mgbe Thomson kere ihe nlere a, ọ hapụrụ nkwupụta mbụ banyere atom atom. Nkwupụta a dabere n'eziokwu ahụ bụ na e mepụtara atom dị iche iche. N'ịbụ onye ọkà mmụta sayensị kwenyere na ọ chọrọ ịmepụta usoro nke atọ ya nke dabere na nnwale nnwale nke amaara n'oge ya.
N’agbanyeghi n’ezie na ihe nlere a adighi n’uzo zuru oke, o nwere ike inye aka n’itinye ntoala ebe edobere ya ka umuaka ndi ozo ga-aga nke oma. Ekele maka ihe nlere a, enwere ike ịme nyocha dị iche iche nke dugara na nkwubi okwu ọhụụ na ọ bụ otú ahụ ka sayensị anyị maara taa si mewanyewanye.
Mmachi na njehie nke ụdị Thomson atomic Model
Anyị ga-enyocha ihe bụ nsogbu nke ihe nlere a na-agaghị aga nke ọma na ihe kpatara na ọ nweghị ike ịga n'ihu. Ihe mbụ bụ na ọ nweghị ike ịkọwa otu esi ebu ebubo ndị ahụ na elektrọn n'ime atọm. Enweghị ike ịkọwa nke a, ọ nweghịkwa ike idozi ihe ọ bụla gbasara nkwụsi ike nke atọm.
Na ya tiori o kwughị ihe ọ bụla banyere atọm nwere a ntọala. Ama taa anyị maara na atọm mejupụtara oghere nke mejupụtara proton na neutron na electrons na-agbagharị gburugburu na ike dị iche iche.
Achọpụtabeghị proton na neutron. Thompson gbalịrị ịdabere na nkọwa ya site na nkọwapụta site na ihe ndị sayensị gosipụtara n'oge ahụ. Mgbe nnwale ọla edo foil gosipụtara na ọ bụ eziokwu, a tụfuru ya ngwa ngwa. Na nnwale a enwere ike igosi na ọ ga-enwerịrị ihe dị n'ime atọm nke na - eme ka ọ nwee ụgwọ dị mma na oke. Nke a amaralarị na ọ bụ ntọala nke atọm.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị atọmịk Thomson.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Msdị atọmịk Thomson